Somaliland: “Waa Nasiib Darro Inay Maamulka Muqdiisho Ku Soo Darsato Somaliland Qorshaha Doorashooyinkooda” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Waa Nasiib Darro Inay Maamulka Muqdiisho Ku Soo Darsato Somaliland Qorshaha...
Somaliland: “Waa Nasiib Darro Inay Maamulka Muqdiisho Ku Soo Darsato Somaliland Qorshaha Doorashooyinkooda”
Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa meel adag iska taagtay isla markaana nasiib darro ku tilmaantay go’aankii 27-kii bishii January la soo dhaafay dawladda Muqdisho ay Somaliland ku soo dartay qorshaha doorashooyinka dalkooda ka dhacaya sannadkan aynu ku jirno ee 2016-ka.
Sidaasna waxaa lagu bayaamiyay War-murtiyeed habeen hore ka soo baxay wasaaradda khaarajiga Somaliland oo luuqadda af-ingiriisiku qornaa oo loogu tallo-galay in beesha caalamka loogu iftiimiyo mawqifka Somaliland.
“Anigoo ku hadlaya magaca dawladda Somaliland, waxaan jecelahay in aan caddayno mawqifkayaga la xidhiidha war-murtiyeedkii 27-kii January 2016-ka ay soo saartay dawladda fadaraalka Soomaaliya ee khusaysay qaabka doorashadda dalkoodu u dhacayso sannadkan 2016-ka.Warbixinta Soomaaliya waxay ahayd mid nasiib darro ah inay Somaliland ku soo darsadaan qaab dhismeedka iyo habka doorashadoodu u dhacayso. Jamhuuriyadda Somaliland waligeed marnaba kama aanay qeyb noqonin khariirada federaalka Soomaaliya iyo doorashooyinkooda midnaba,”ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaas.
Wasaaradda Arrimaha dibaddu waxay intaas ku dartay “Waxaanu ku bogaadinaynaa beesha caalamka, dedaalada ay ku gacan siinayaan nabadeynta Soomaaliya iyo inay gacmaheeda isku taagto, iyadoo aanu filayno inay arrintaasi wanaagsan tahay. Waxaanu xusuusinaynaa beesha caalamka in aanu wada hadallo noo bilaabmeen Soomaaliya sannadkii 2012-kii, si aanu uga wada xaajoono ugana wada heshiinno mawaadiicda guud ee na wada khuseeya, oo aanu caddayno mustaqbalka xidhiidhka aanu yeelanyno.
Waxaanu u diyaar u nahay wada hadallada, waxaanan mabsuud ku nahay taageerada beesha caalamku ka geysanayso nidaamka wada hadallada.”
Warkaas waxa lagu sheegay in Somaliland hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka heer ka gaadhay “Waxay jamhuuriyadda Somaliland hore u sheegtay inay tahay mid guullo ka gaadhay dimuqraadiyadda oo qabatay doorashooyin nab-doon oo xor iyo xalaal ah. Dadkayagu waxay sanduuqa codbixinta dul tageen shan jeer shan iyo tobankii sannadood ee la soo dhaafay, waxaanay doorteen dawladooda, Golaha Wakiiladda iyo Goleyaasha deegaamadda wadanka, waxaana dhacday in marar kala duwan si guul ah awooda dawladnimo loogula kala wareegay. Waxaanu isu diyaarinaynaa sannadka 2017-ka, doorashooyinka Baarlamaanka iyo madaxtooyadda, markaa waxba nagama khuseeyaan doorashadda Soomaaliya ka dhacaysa 2016-ka.”
War-saxaafadeedka wasaaradda Arrimaha dibadda waxa lagaga sheekeeyay taariikhda guunka ah ee Somaliland u soo martay dawladnimadeeda, waxana lagu yidhi “Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku faanaysaa inay leedahay taariikh dheer oo ku dhow 130 sannadood oo ku salaysan xuduudo mucayin ah. Waxay ahayd xukuumad uu xukumi jiray Ingiriiska 73 sannadood, intii u dhaxaysay 26-kii June 1960 illaa 1-dii July 1960 waxay ahayd qaran madax banaan. Somaliland soddon sannadood oo u dhexeeyay 1960-kii illaa 1991-kii waxay qeyb ka ahayd midowgii la galay oo khubarradu ay su’aal ka keeneen-ba sharciyadii uu ku salaysnaa.”
“Sannadkan waxaanu qabanaynaa munaasibad aanu ugu dabaal degayno sannad-guuradii 25-aad ee ka soo wareegtay dawlad shaqeynaysa oo aanu dhisanay, waxaanu ku cusuumi doonaa beesha caalamka inay iyaga laftoodu ka soo qeyb-galaan guulaha cajiibka ah ee Somaliland gaadhay.
Somaliland waa xaqiiqo jirta, waxaanay buuxisay dhammaan shuruudihii laga doonayay qaran madax banaan oo dhan, waxaanay xuduudaheedu waafaqsan yihiin qoddobka 4-aad ee Charter-ka Midowga Afrika oo sheegaya inay sax yihiin xuduudihii gumaystuhu ka tageen,”ayaa lagu soo gunaanaday warkaas ka soo baxay dawladda Jamhuuriyadda Somaliland.
Doorashooyinka Somalia ee 2016
Somaliland: Wadani opposition leaders hold talks with Deputy President Abdirahman Saylici
Somalia: Dahir Alasaw Identified as Al Shabaab Undercover Agent
Somaliland: “Dugsiyada Siyaasadda & Afduubka Carruurta u haysta, Waalidiintaay ka soo Kaxaysta”
Somalia: Top Al Shabaab leader killed in Somalia
Deg Deg: Ciidammada Booliiska Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Ku Eedaysan Dilka Mid Ka Mid Ah Dirawallada Gaadiidka Iskaga Goosha Somaliland Iyo Puntland
Wargane Tv: Muuse Biixi Oo Ka Hadlay Kalsoonida Shacabka Reer Gabilay Iyo Dareenka U Ka Qabo